Maitiro ekuona Mhenyu Mapikicha pane zvekare zvishandiso | IPhone nhau
Maitiro ekuona Mhenyu Mapikicha pane zvekare zvishandiso
Nezuro takakuudza maitiro ekugovana Mhenyu Mapikicha nemamwe madivayiri uchichengetedza hunhu hweaya mafoto emifananidzo, uye kunyangwe isu takataura kuti chete maApple 6s uye 6s Plus aikwanisa kutora rudzi urwu rweanopikisa, vanogona kutariswa pane chero iOS chishandiso.kuti iwe une yazvino vhezheni, iOS 9, yakaiswa, zvisinei nezera rayo. Zviri nyore chaizvo kukwanisa kunakidzwa nemhando idzi dzekutora pane edu "echinyakare" iPhones uye iPads uye isu ticha tsanangura kuti sei.
Kuona aya mafoto paPhones nyowani kuri nyore kwazvo nekuda kwehunyanzvi hutsva hwayo 3D Kubata skrini. Paunogamuchira chifananidzo chakatorwa seRararama Photo, iwe unofanirwa kungo pusha zvishoma pachiratidziri patinenge tichiona foto uye iyo mhenyu, pamwe neayo odhiyo, inotamba. Masekonzi mashoma ekufamba kwemufananidzo unogona kuita chifananidzo chionekwe. Asi isu tinozviita sei nedhivha isina 3D kubata? Izvo zviri nyore kwazvo, nekuti kunyangwe isu tisina iyo skrini iyo inokwanisa kuona kumanikidza kwaunodzvanya nako, isu tinoita tinogona kuita chiratidzo chakaenzana: tinya uye bata. Icho chifananidzo chichauya kuhupenyu uye isu tinokwanisa kuchiona chaizvo zvakafanana nezviri mumaPhones matsva.
Ruzivo rwakakosha ndeyekuti ungaziva sei aya marudzi emifananidzo, nekuti kana tisingazive chinonzi Live Photo, hatizokwanise kuita chiratidzo. Mifananidzo iyi inozivikanwa nekoni kadiki mukona yekumusoro kuruboshwe kwechiratidziro ine madenderedzwa akati wandei sedhara. Chero chifananidzo chinoperekedzwa neichi chiratidzo chinogona kutariswa seanoratidzira. Zvakare imwe yekupedzisira tsananguro: kana iyo pikicha yakatumirwa kwauri neshoko iwe uchafanirwa kubaya pairi kuitira kuti ionekwe mune yakazara skrini uye ipapo iwe unogona kuita chiratidzo chekubata pasi kuti uione seRarama Photo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuona Mhenyu Mapikicha pane zvekare zvishandiso
Chii chinoita masvosve kana iPhone ikarira?
Apple haifarire iyo Windows logo uye inogadzira yayo yega